नेपालको लगातार तेस्रो हार - Naya Patrika
नेपालको लगातार तेस्रो हार
काठमाडौं, २७ फागुन | फागुन २७, २०७४
एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको छनोट खेलमा नेपाल शनिबार अफगानिस्तानसँग ६ विकेटले पराजित भएको छ । समूह ‘बी’मा तेस्रो हार सामना गरेपछि नेपालको सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावनामा केवल झिनो गणितीय आधार मात्र छ । जिम्बावेको बुलावाओ मैदानमा नेपालले ४९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ९४ रनको मध्यम योगफल खडा गर्यो‍ । प्रत्युत्तरमा टेस्ट तथा एकदिवसीय मान्यता प्राप्त अफगानिस्तानले ३८.४ ओभरमा ४ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ९५ रन जोड्दै सुपर सिक्सको सम्भावना कायमै राख्यो ।
के हुन्छ अबको समीकरण ?
अफगानिस्तान र नेपालबीचको खेल गर या मरको स्थितिमा थियो । यो समीकरणमा अफगानिस्तानले बाजी मार्दै आफ्नो शाख रक्षा गरेको छ । नेपालले अर्को चरणमा पुग्न हङकङविरुद्धको खेलमा चमत्कारी नतिजा निकाल्नुपर्छ । हङकङमाथि सानदार जित निकाल्दा नेपालको चार खेलमा २ अंक हुनेछ । यस अवस्थामा हङकङको पनि चारै खेलबाट २ अंक हुनेछ । अफगानिस्तान, नेपाल र हङकङबीच उत्कृष्ट रनरेट हुने टोली सुपर सिक्समा पुग्नेछ । यस समूहबाट जिम्बावे र स्कटल्यान्ड सुपर सिक्समा पुगेका छन् ।
टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाललाई पुनः एकपटक ओपनिङले धोका दियो । प्रशिक्षक जगत टमाटाले दिलीपनाथको स्थानमा ज्ञानेन्द्र मल्ललाई अनिलकुमार साह ओपनिङ जोडीका रूपमा क्रिजमा पठाए । तर, यसपटकको रणनीति पनि काम लागेन । अनील ७ रनमै आउट भए । कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्रले दोस्रो विकेटका लागि ९२ रनको साझेदारी गरेर नेपाललाई राम्रो स्थानमा पुर्या‍ए । आफ्नो विकेट बचाउनेतर्फ केन्द्रित रहँदा ज्ञानेन्द्रले ६९ बलमा २३ रन बनाए । कप्तान खड्काले आक्रामक इनिङ खेल्दै ८२ बलमा १० चौका र एक छक्काको मद्दतमा ७५ रन बनाए । दीपेन्द्र सिंह ऐरीले संयमित हुँदै ४१ बलमा ३२ रन बनाएका थिए । अरिफ सेखले ३६ बलमा २३ रन बनाए । प्रशिक्षक जगतले मध्यक्रमका भरपर्दा ब्याट्सम्यान शरद भेसवाकरलाई महत्वपूर्ण खेलमा आराम दिँदै ललित राजभण्डारीलाई मौका दिए । नेपाल एक समय ४४.४ ओभरमा १७९÷६ को अवस्थामा थियो । तर, नेपालले थप १५ रन जोड्दा ४ विकेट गुमायो ।
अफगानिस्तानको उत्कृष्ट ब्याटिङ
अफगानिस्तानका सबै ब्याट्सम्यानले नेपालविरुद्ध उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे । अफगानिस्तानले पहिलो विकेटका लागि २८ रनको साझेदारी गर्यो‍ । कप्तान रसिद खानले १४ बलमा २१ रन र जाभेद अहमादीले ५४ बलमा २६ रन बनाए । दोस्रो विकेटका लागि रहमत साहले जाभेदसँग ६५ रनको साझेदारी गरे । रहमातले ४६ रन बनाए । मोहमद नाबीले ३२ बलमा ३४ रन जोडे । नाबीले नजिवुल्लाह जर्दानसँग चौथो विकेटका लागि ३९ रनको साझेदारी गरे । जर्दानले नटआउट ५२ रन जोड्दा ४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे ।
#नेपालको लगातार तेस्रो हार
फ्रिकिकमा कोस्टारिका निराश
आजको खेलमा जो चम्किन सक्छन्
विश्वकपबारे यी कुरा तपाईंलाई थाहा छ ?
अनि, बग्छ सडकमा दूध
निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरिँदैन : महासेठ
बलिउडमा दिदी हिट, बहिनी फ्लप
अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाको ३९ घन्टापछि उद्धार
३ अर्ब ठगी प्रकरण :अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी
मनाङकाे सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा आवासीय पढाइ
बजेट संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश सभा अवरुद्ध
प्रदेश ४ सत्ता पक्षका सांसद नै बजेटको विरोधमा
एनआरएन कप-२०१८ को उपाधी नेपाली स्पोर्ट्स क्लबलाई
बजेट बनाउँदै स्थानीय सरकार
प्रदेश २ मा सवारी दुर्घटना ११ महिनामा ३६३ को मृत्यु
पिसाबथैलीको एउटा समस्या